Incubator | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Kedu otu esi eme ka ihe na-esite na friji rụọ ọrụ? Video ọzụzụ
Ịzụlite anụ ọkụkọ bụ ọrụ na-akpali akpali. Onye na-emepụta onwe ya bụ incubator bụ ihe bara uru nke mepụtara na nke a. Ngwaọrụ ndị na-emepụta ihe na-arụpụta na ụlọ ọrụ pụrụ iche bụ ihe dị oké ọnụ ahịa, ndị na-achọ ịzụ anụ ọkụkọ anaghị enwe ike ịzụta ngwá ọrụ dị otú ahụ.
Uru na ọghọm nke Blitz incubator, ntuziaka maka iji ngwaọrụ ahụ
Taa, maka ndị ọrụ ugbo na-azụ anụ ọkụkọ, nhọrọ nke ezigbo incubator bụ ezigbo nsogbu. Nyere na onye ọrụ ugbo nwere ike itinye ego ya, ọchịchọ ya nwere ike ịnweta igwe ma ọ bụ ọnụ ọnụ. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu n'ime ngwaọrụ ndị a - Blitz 72 incubator.
Ovoskop: esi edozi nsen
Inyocha àkwá, ma tupu incubation na n'oge, bụ nzọụkwụ dị mkpa n'ime ọkụkọ azụ. Ezi onye inyeaka n'okwu a bụ ovoscope - ngwaọrụ nke na-eme ka o nwee ike ịchọpụta ntụpọ, nsogbu, ma ọ bụ nyochaa mmezi nke embrayo. Kedu ihe bụ ovoscope? Ovoskop bụ ngwaọrụ pụrụ iche na enyemaka nke njikwa nke njirimara nke njirimara nke ihe ndozi ahụ.
Ọ ga-ekwe omume mee ka thermostat n'onwe ya maka incubator (ihe ntanetụ)
Ọganihu na-aga nke ọma na àkwá agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na enweghị ọnọdụ okpomọkụ. Usoro a na-enye site na thermostat pụrụ iche maka incubator, nke na-ejide ± 0.1 Celsius, ebe ọ nwere ike ichekwa ọnọdụ okpomọkụ site na 35 ruo 39 Celsius. Ihe ndị dị otú ahụ dị iche iche na ngwaọrụ dijitalụ na ngwaọrụ analog.
Esi họrọ otu thermostat maka incubator, ụdị isi na ụdị ụdị ngwaọrụ
Otu n'ime usoro ugbo kachasị ewu ewu taa bu ugbo ulo ozuzu. Nke a bụ n'ihi ọnụnọ obere ohere na ego efu. Nke kachasị mkpa bu iwepu umu chicks na mmejuputa ha. Enwere ike ime nke a ọbụna n'ụlọ ahụ na-eji otu incubator nke nwere otu thermostat.
Ọ bara uru na-eto eto ozuzu na Cinderella incubators?
O siri ike maka onye ọrụ ugbo nke oge a na-etinye aka na ụmụ nnụnụ na-emepụta na-enweghị igwe ọrụ ọrụ dị otú ahụ dị ka onye na-emepụta ihe. The incubator bụ igwe na-akwụ ụgwọ na nke a pụrụ ịdabere na ya nke na-enye gị ohere ịba ụba ọnụ ọgụgụ nke obere ngwaahịa ị na-atụ anya, n'agbanyeghị oge. Na ahịa nke oge a, e nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị, dị iche iche na ike, ọrụ na ọnụahịa.
Anyị na-eto ọkụkọ na incubator
Ịkụnye nsen anụ ọkụ n'ụlọ na-adọrọ mmasị, kama ọ bụ nsogbu. Iji nweta ahụ ike, dị mma, mkpụrụ obi ụtọ n'oge kwesịrị ekwesị, ị ghaghị ịgbaso usoro iwu ndị ị ga-ahụ n'isiokwu anyị. Anyị ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu usoro dum nke chicks incubating, site na nhọrọ na ịtọ ihe n'ime ngwaọrụ, na-ejedebe na-enwe obi ụtọ, na-atụ anya ịmụ ụmụ obere nnụnụ.
Otu esi choputa incubator maka àkwá: njirimara kacha mma
Ọganihu ọrụ anaghị eguzo ma kwa afọ ọzọ ngwaahịa ndị dị elu na-abịa ahịa. Nke a na-emetụta ndị na-atụgharị uche. Ndị na-emepụta mgbe nile na-eweta ngwaahịa ọhụrụ, nke mere na ha na-etinye ndị ahịa na ọrụ siri ike nke ịhọrọ nke kachasị mma maka nsen. Ka anyị gbalịa ịtụle uru na ụkọ ihe dị iche iche nke ụdị ngwaahịa asatọ, nke bụ ndị isi na ahịa nke ngwaahịa a.
Otu esi achọputa onye kwesiri ntutu maka ulo
Ndị niile na-eche banyere nzụlite anụ ọkụkọ buru ibu, buru ụzọ gee ntị na "nhazi". Ụdị dị mma, ma na nnukwu mpịakọta dị otú ahụ abụghị ihe ziri ezi, ọ bụghịkwa ọkụkọ ọ bụla ga-anọdụ ala n'olu. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, akụkụ ndị pụrụ iche dị mma. Anyị na-achọpụta otu esi achọpụta incubator a pụrụ ịdabere na ya, dabere na njirimara ya.
Atụmatụ nke ọrụ nke incubator Ezi nne okuko
N'ọtụtụ atụmatụ ụlọ, otu onye nwere ike ịnụ mkpọtụ ahụ na-eme mkparịta ụka: mkpịsị ụkwụ anụ ọkụ, nkwụsị nke ọbọgwụ, okirikiri nke geese, na mkpu nke turkeys. Ka ị ghara ịzụta ụmụ na-eto eto na mmiri ọ bụla, onye nwe ya ga-aba uru karị iji were nnụnụ ahụ n'ugbo ya. Iji mee nke a, ịkwesiri ịzụta ngwaọrụ dị ka incubator. Ka anyị tụlee ihe ọkụkụ "Ezigbo nne okuko," bụ nke Novosibirsk kwadoro "Bagan" mepụtara.
Akụrụngwa nke ejiri ụlọ incubator "Dina"
Taa, ụlọ ahịa na-enye ọtụtụ ọnụọgụ dịgasị iche iche, ma ndị Rọshịa ma ndị dị na ya. Nnukwu nnụnụ bụ azụmahịa dị mkpa nke chọrọ ihe ọmụma na ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị. Dị ka ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-azụ anụ ọkụkọ na-ekwu, mmadụ ekwesịghị ịgbalị ịzụta ego ndị mba ọzọ dị oké ọnụ ahịa, ebe ọ bụ na e nwere nnukwu ụlọ ahịa.
Nkọwa nke incubator eluigwe na ụwa maka àkwá "Stimul-1000"
Otu incubator e mere maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke àkwá na-ewe onye ọrụ ubi ozuzu ka ọ dị ọhụrụ, dịkwuo mma, ọkwa. Iji nkeji dị otú ahụ eme ka ọ bụghị naanị ịnweta ọtụtụ ọkụkọ, ma na-emekwa ka ha hụ na ha dị mma ma na-akwụ ụgwọ ego. Njirimara dị elu ma na-arụpụta ihe dị iche iche nke ngwaọrụ dị otú ahụ bụ "Stimul-1000".
Nyocha nke incubator maka àkwá "Titan"
Ndị ọrụ ugbo na-azụ obere ala, jiri nlezianya na-eleta nhọrọ nke incubator maka ozuzu ozuzu. N'otu oge ahụ, a na-akwụ ụgwọ anya maka usoro nchịkwa, ikuku ventila, ike na ihe ndị ọzọ dị mkpa nke ngwaọrụ ahụ. N'okpuru ebe a, anyị ga-ekwu okwu gbasara ọfụfụ nke oge a maka iji ejiji "Titan".
Ntughari ntughari ntughari maka nsen Covatutto 108
Ị nwere ike inwe mgbagwoju anya n'etiti ụdị dịgasị iche iche maka ịzụlite ọkụkọ, ebe ọganihu nke ulo ozuzu okuko na-adabere na nsonaazụ ndị a. Ya mere, na-ahọpụta ihe nlereanya nke incubator achọrọ, ịkwesịrị ịdabere na ndị nrụpụtapụtara egosipụtara, bụ ndị ndị na-ahụ maka ngwaahịa ha na-anabata.
Nyochaa incubator maka nsen "Remil 550TsD"
Incubator "Remil 550TsD" ogologo na ike meriri ahịa na ya ubi. Ngwaọrụ a na-enye gị ohere ime ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nnụnụ na-agagharị. N'ihi ọrụ a pụrụ ịdabere na ya nke ngwaọrụ maka ịnọgide na-enwe ọnọdụ ihu igwe, Remod 550CD na-eweta 95% nke ntọala mbụ maka incubation.
Nkọwa nke incubator maka àkwá "Nyocha IP-16"
E nwere udiri nke ọkụkọ, dịka, dịka ọmụmaatụ, ndị mara mma na-acha ọcha ọcha Dutch, bụ ndị na-adabere n'ọrụ nne ha ma ghara ịchọta àkwá. Ndị ọzọ hens na-agbalị iji ikwesị ntụkwasị obi mezuo ọrụ nne na nna ha, ma ọnọdụ ndị ọzọ na-egbochi. Ya mere, onye ahụ mepụtara incubator na oge kwesịrị ekwesị ma si otú a mụbaa ọkụkọ ọkụ, nke ugbu a karịa ugboro atọ ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ nọ na mbara ala.
Isi nke incubator maka nsen Sovatutto 24
Ndị na-emepụta ihe ndị ọzọ na-emepụta ihe dị iche iche na-arụ ọrụ dị mma, mgbakọ dị elu na ọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Ihe ka ukwuu n'ime ọrụ ndị dị na ngwaọrụ ndị a na-akpaghị aka ma ghara ịchọ ka onye ọrụ ugbo na-ele ya anya mgbe nile. Otu n'ime ndị na-ewu ewu kachasị ewu ewu na ụlọ bụ ụlọ ọrụ Italia.
Isi nke incubator maka àkwá "IFH 1000"
Ntughari bu usoro di mgbagwoju anya, ihe iga nke oma dabere na otutu ihe. Ugbo ndi na aru oru ugbo umu anu ugbo jiri ugbua jiri ihe ndi ozo jiri usoro nlekota ndi ozo bu ihe di mkpa maka embrayo. Otu n'ime ngwaọrụ ndị a - incubator "IFH 1000".
Etu esi kpochapu incubator tupu etinye nsen
Iji mee ka ụmụ anụmanụ na-eto eto dị mma na-akpọnye ha, ha ga-edozi ngwaọrụ ahụ maka ọrụ. Na mgbakwunye na ikpo ọkụ, na-edozi ihe ngosi ziri ezi na ihe ndị yiri ya, tupu iji ngwaọrụ ahụ, ọ dị mkpa ime disinfection. Kedu etu esi kpochapu incubator, nke a kọwara n'isiokwu a.
Ntughari nke incubator maka àkwá "Universal-55"
Otu n'ime ihe ndị na-emekarị nke ọma na nke ọma (n'etiti nnukwu ụdị) bụ Universal-55. Ọrụ ya na-enye gị ohere ịmalite ịmịlite ọtụtụ chicks na-arụpụta ihe na ahụike. Ọzọkwa, nhazi nke unit a mgbe ọ na-arụ ọrụ adịghị achọ nnukwu akụ mmadụ, nke na-echekwa ego.
Ụdị dị iche iche nke tomato na "tomato Lisa": nkọwa nke àgwà na ntụziaka na-eto eto
Akụkụ cassette nkọwa nke aṅụ na pavilions "Berendey"
Ị ga-enwe obi ụtọ na ụtọ, ụtọ uto nke mkpụrụ - Royal Penguin Tomato: nkọwa dịgasị iche iche
Kedu ka esi gbaa Kalanchoe n'ụlọ?
Ozi na-akpali mmasị gbasara galik - ihe ndị mejupụtara ya na kemịkal, ọdịnaya calorie, bara uru na ngwọta
Kedu ụdị ọdachi bụ ọkụ maka ọkụkọ na esi egbochi hyperthermia?